Hitsena ny Vehivavy tsy Voatery ho ny Firaisana ara-nofo ny Fanandevozana in Italia Marie Claire Aostralia
Tiako ny mihevitra ny tenako manam-boninahitra italiana, na dia amin’ny fomba ofisialy, tsy manana italiana lova. Resy lahatra aho ny fahafahana handevona tafahoatra dia be paty dia tsy maintsy azo antoka fa azo lazaina ho italiana gene any ho any. Ary raha tsy voajanahary, ara-panahy, Italia nandresy ny foko toy ny zatovo. Aho rehefa sambatra aho fa handeha ho Mantua amin’ny sekoly fifanakalozana. Ny mahafinaritra italiana mpampianatra, Andriamatoa Hama (na Atoa Prosciutto araka ny anaram-bosotra azy) schlepped nisasaka manerana izao tontolo izao amin’ny fito Aussie ny tanora tsy faly noho ny fanantenana ny fotsy Krismasy sy hamaha ny lalàna manodidina ny ara-dalàna ny fisotroana taona. Ny scam bio dia manova ny fiainana. I niara-nipetraka mahafinaritra hampiantrano ny ray aman-dreny izay tia ahy ho toy ny zanany vavy izy ireo fa tsy nanana. Ny miaramila rahalahy nanadala ahy toy ny mpiray tam-po izy tsy te. Ary ny nahandro niarahaba ahy toy ny eo an-toerana, malala-tanana ary nampiany kilao ny waistline ao anatin’ny herinandro. Ny paty sy ny sisa maro hafa no nitarika ahy indray Italia mihoatra ny am-polony hatramin’ny fotoana. Fa niverina tahaka ny mpanangom-baovao ho an’ny SBS Dateline nahita ahy hiatrika ny lafiny ny firenena na oviana na oviana aho nahita na nandre ny teo aloha. Tena mampihomehy ny zavatra hitanao.
Rehefa zatra mandeha any Italia, aho nahita ny firenena amin’ny lalina ny tantara, ara-toekarena loza sy ny faniriany fatratra amin’ny sakafo sy ny lamaody. Dia nandeha tany Asti any amin’ny faritra Avaratr’i Italia, ny antontan-taratasy ny vehivavy tsy voatery ho ny firaisana ara-nofo fanandevozana tany ity voalohany ity izao tontolo izao ny firenena. Ny toa idyllic mpizaha tany afovoan’i tiako, raha ny marina global firaisana ara-nofo fanondranana hub. Vehivavy nizeriana avy mafy vondrom-piarahamonina mahantra no haondrana any Libia ary avy eo dia tamin’ny sambo ho any Italia. Ry zareo ny nampanantena asa toy hairdressers sy nannies, fa tamin’ny nahatongavany, izy ireo dia namidy ho fanandevozana ara-nofo. Ny fandraisana ankehitriny. Ny pimp captor sy whopping dolara, dolara trosa. Nandritra ny Dateline tsimoka, nihaona am-polony maro ary am-polony no lasibatry ny fanondranana olona. Tohina aho amin’ny alalan’ny fomba tanora izy ireo. Ary toy ny tovovavy na aiza na aiza, izy ireo manahy be loatra momba ny selfies, mifosa ny momba ny fiarahana izay sy ny fanaovana antoka fa ampy ny finday bola sms ny namana. Tsy mba nahatsapa ny andro ankehitriny ny fanandevozana toa Tessie — izy ny mahatsikaiky, nofy ho lasa mpilalao sarimihetsika avy any Hollywood sy te-hihaona olona izay tia azy fotsiny ny fomba izy. Toa Hatsaran-tarehy, izay eo amin’ny tontolo hafa dia mety handeha ny lampihazo ho Prada na ny Gucci.
Izy feisty ary tena namana
Fanandevozana tany Italia tamin’ny toa Regina (fa tsy ny tena anarana) — izay tony sy saro-kenatra. Zara raha taona, foana aho mieritreritra hoe ahoana manify izy, efa ho taolana. Hitako avy taty aoriana izy dia ny volana bevohoka. Ireo vehivavy sy ny ankizivavy no velona sy miasa ao amin’ny tany lemaka imason’ny marina manerana an’i Italia. Dia miaritra ny fanolanana, ny daroka, ary nandany taona mandeha eny an-dalambe nandritra ny dimy Euro tsofy asa na Euro quickies. Tena mahatsiravina fisiany — ny aho dia latsaka ny ranomasoko mihaino ny tantaran’izy ireo. Raha toa ianao mandrakizay any Italia — ny mijery ny manodidina. Eo amin’ny lafiny ny arabe sy lalam-ianao mahita ny vehivavy, ny tovovavy, pacing sy miverina, indraindray dia miezaka ny onja anareo midina. Alaivo sary an-tsaina ny mponina rehetra Ballina voaroaka Italia noho ny fanandevozana ara-nofo. Izay no mahatonga ny vehivavy maro no voatery miditra amin’ny fanandevozana in Italia isan-taona.
Nisy bebe kokoa satria
Iray alina nandritra ny horonantsary, manodidina ny misasak’alina hafahafa ny zavatra nanomboka ny zava-mitranga. Dia nahatsikaritra vitsivitsy tranofiara toa ka lasa antsika na aiza na aiza izahay no nitondra fiara. Avy eo dia nahita fiara iray hafa fotsiny ny zava-nitranga mba hanaisotra ny sy hanakana amin’ny fotoana rehetra izahay. Nanomboka nanoratra teo maro takelaka manara-maso raha izahay sary an-tsaina ny zavatra izahay fa tsy. Ny andro manaraka, ny mponina ao an-toerana nilaza fa isika dia adala, ary efa mametraka ny tenantsika eo amin’ny loza. Nilaza taminay izy ireo ny mafia no velona sy salama tsara any amin’ireo faritra ireo. Fanondranana olona ny tontolo izao tsy mitsaha-mitombo haingana indrindra ny heloka bevava enterprise. Izany dia miteraka dolara lavitrisa dolara (AUD) ao amin’ny tombom-barotra tsy ara-dalàna isan-taona, noho izany dia sarotra ho azy ny mijanona. Ny Papa dia miezaka ary toa izany koa ny mpitandro ny filaminana, na dia nilaza izy ireo fa misy kely izy ireo atao. Ny fivarotan-tena dia tsy ara-dalàna any Italia, na dia eo aza ny Katolika kolontsaina. Ny fanandevozana ny vehivavy dia nilaza izy ho voaozona na ny fianakaviana hiverina any amin’ny Nizeria ratraina izy ireo raha sahy nandositra. Noho izany, ny fisamborana sy ny fanenjehana ara-pitsarana dia tsy fahita firy. Fa ny sasany manao hanorina ny herim-po handao, nanao vivery ny fahatezeran ny pimp na madama izay ‘tompon’i’ izy ireo. Ny anankiray izay efa nandositra nilaza tamiko raha izy ve no nahita — dia tsotra:»izy ireo dia hamono ahy.»Na dia ry zareo monina any soa aman-tsara ny trano ankehitriny, arovana, mbola io andro maro izahay nihaona tsy avela ao amin’ny Facebook na ny haino aman-jery sosialy ho an’ny fiarovana ny antony, araka ny zava-drehetra izy ireo nihazona izany andraikitra izany amin’ny alalan’ny aho naively nihevitra izy ireo dia tsy maintsy mankahala Bella Italia sy ny zavatra dia ny hametraka azy ireo amin’ny alalan’ny izany.
Fa tsy misy
Izy ireo dia nahatsapa ho manan-trosa Italia noho ny fanomezana ny fiainana lavitry ny fahantrana ao Nizeria ary ankehitriny, blessedly, ny horohoro ny any Italia no eny an-dalambe. Meggie Palmer no mpanangom-baovao ho an’ny SBS Dateline. Afaka manaraka azy ao amin’ny twitter Meggie Palmer sy Instagram
← Nahoana ry zalahy no te-hihaona vavy' ray aman-dreny. Midika inona moa izany
Maimaim-poana amin'ny aterineto ny lahatsary amin'ny chat efi-trano noho ny miresaka amin'ny olona manerana izao tontolo izao →